२१ फागुन, काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य एक रुपैयाँ घटाएको छ । स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीअनुसार अब पेट्रोलको मूल्य १०४ रुपैयाँबाट घटेर १०३ रुपैयाँ कायम भएको छ । यो काठमाडौँ उपत्यकामा आधारित मूल्य हो । अन्य पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने यथावत् रहेको आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिनुभयो । अब निगमले पाक्षिकरुपमा […]
विभिन्न कम्पनीले १० अर्ब बढी बोनस दिने
१८ फागुन, काठमाण्डौ । ४७ कम्पनीले १० अर्ब ८१ करोड तीन लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस शेयर आफ्ना शेयरधनीलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा उपलब्ध गराइएको जानकारीअनुसार १० करोड ५९ लाख २२ हजार ८६५ कित्ता बराबरको शेयर बोनसबापत शेयरधनीलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि हालसम्म बोर्डमा […]
भर्ने होइन आइपिओमा आवेदन ? आरम्भ माइक्रोको आइपिओ खुल्यो !!
१६ फागुन, काठमाण्डौ । आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था (AMFBSL) ) को फागुन १५ गतेदेखि आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरको दुई करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको २ लाख ९४ हजार कित्ता आइपिओ निष्कासन गरेको हो । कम्पनीले निष्कासन गरेको २ लाख ९४ हजार कित्ता सेयरमध्ये ८ हजार ८२० कित्ता सेयर […]
फत्तेबाल आँखा अस्पताललाई शाह दम्पत्तीले गरे १ अर्ब बराबरको जग्गा दान
७ फागुन, काठमाण्डौ । श्रीजंग शाह र रुद्रकुमारी शाह दम्पत्तिले फत्तेबाल आँखा अस्पताल नेपालगन्जलाई एक अर्ब बराबरको घरजग्गा दान गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका १ कान्तिपथको तीन रोपनी बढी जमिन सहितको घरजग्गा उनीहरूले अस्पताललाई दान गरेका हुन् । शाह दम्पत्तिले दान गरेको घरजग्गाको चलनचल्तीको मूल्य १ अर्बभन्दा बढी छ। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर शाह दम्पत्तिले […]
२० वर्षदेखि उही ढर्रामा कम्पनी वर्गिकरण गर्दै नेप्से
३ फागुन, काठमाण्डौ । २० वर्षदेखि परम्परागत ढर्रामा सूचीकृत कम्पनीहरुको वर्गिकरण गर्दै आइरहेको नेप्सेले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । नेप्सेले आव २०५३/५४ देखि सूचीकृत कम्पनीको वर्गिकरण गर्न थालेको हो । नेप्सेले सो व्यवस्था अनुसार ‘क’ वर्गमा पर्ने कम्पनीहरुको सूची सार्वजनिक गर्दै आएको छ । बाँकी रहेको कम्पनीहरु स्वतः सूचीकरणभन्दा बाहिर पर्ने छन् । नेप्सेले आव […]
क्षमता दोब्बर बनाउन उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले सरकारसँग माग्यो २ अर्ब १२ करोड ऋण
२ फागुन, उदयपुर । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले नेपाल सरकारसँग २ अर्ब १२ करोड ऋण माग गरेको छ । आगामी चार वर्षभित्र सरकारको ऋण तिर्ने कार्ययोजनासहित क्षमता दोब्बर बनाउन ऋण मागेको हो । उद्योगका लेखा शाखा प्रमुख कमल पौडेलले औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न विज्ञको टोली बोलाएर परामर्श गरी ऋण माग गरेको बताए । ‘उद्योगको उत्पादन क्षमता दोब्बर […]
१ फागुन, काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ वटै वाणिज्य बैंकहरुलाई ओभर ड्राफ्ट अर्थात् अधिविकर्ष कर्जा लगानी घटाउन निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि करिब वर्षदिन अर्थात् ०७५ पुस मसान्तसम्मको सीमा दिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंकहरुले पाँच खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण घटाउनुपर्नेछ । मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र […]
२३ माघ, काठमाण्डौ । व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको विदेशवाट ल्याउन लागेको ४ अर्ब रुपैयाँ रोक्ने राष्ट्र बैकको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले सुमार्गीले चाहेको बेला रकम निकाल्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । पैसा रोक्ने कानुनी आधार नदेखिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका […]
नेपाल टेलिकमको सबैभन्दा बढी बिल तिर्नेको सूचीमा कुलमान
२२ माघ, काठमाण्डौ । नेपाल टेलिकमको १४ औँ वार्षिक उत्सवको अवसर संगै नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सबैभन्दा बढी बिल तिर्ने १२ सेवाग्राहीलाई सम्मान गरिएको छ । यस वर्ष जिएसएम पोष्टपेड व्यक्तिगततर्फ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेका छन् । उनले एक वर्षमा नेपाल टेलिकमलाई १ लाख ९७ हजार ६ सय २५ […]
उपराष्ट्रपति पुनको यातायात भाडाका गुनासा निराकरण गर्न व्यवसायीलाई आग्रह
१७ माघ, चितवन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको पाँचाँै राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । रत्ननगरमा भएको महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि यातायात क्षेत्रको उल्लेख्य योगदान रहेको बताए । उनले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रले राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जिडिपि)मा १० प्रतिशतको योगदान दिइरहेको बताए । मुलुक अहिले राजनीतिक स्थिरतातर्फ अग्रसर […]
बिर्तामोड नगरपालिकाको बजेट ७३ करोड
७ माघ, झापा । बिर्तामोड नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका गर्भवती महिला तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुधारका लागि महिलाहरुलाई निःशुल्क क्याल्सियम चक्की वितरण गर्ने भएको छ । आइतबारदेखि भएको प्रथम नगर परिसद्मा मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटीले शिशुको स्वास्थ्य सुधारका लागि निःशुल्क चक्की वितरण कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । उनले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ का लागि ७३ करोड ४६ लाख ३० […]
जिविसको खातामा भेटियो साढे ७ अर्ब
४ माघ, काठमाण्डौ । निस्कृय भइसकेका तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको खातामा झण्डै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ रकम भेटिएको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्कावाट यस वर्ष उठेको रकम र घर जग्गा रजिस्ट्रेसन बापतको शुल्कसहित आगामी साउनसम्म यस्तो रकम २० अर्ब पुग्ने अनुमान छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिमार्फत रोक्का गरिएका खातामा रहेको रकमको […]
उवासंघ चितवनको अध्यक्षमा प्रधान विजयी
२ माघ, चितवन । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अध्यक्षमा सहनलाल प्रधान विजयी भएका छन् । प्रधानले प्रतिस्पर्धी राजु श्रेष्ठलाई ३ सय ४३ मत अन्तरले पराजित गरे । निर्वाचनमा सहनलाल प्रधान प्यानलका अधिकांश उम्मेदवार विजयी बने । पदाधिकारीमा प्रधान प्यानलले कब्जा गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुननारायण श्रेष्ठ विजयी भएका छन् । विष्णु कँडेललाई झण्डै ६ […]
सुनको भाउ आज रु ४०० ले बढ्यो
२७ पुस काठमाण्डौ । छापावाला सुनको भाउ आज ५६ हजार ४ सय पुगेको छ । नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघले जनाएअनुसार तेजावी सुनको तोलाको ५६ हजार १ सयमा कारोबार भईरहेको छ । हिजोको तुलनामा आज सुन तोलमा ४ सय बढेको छ । चाँदी आज तोलामा ७५० रुपैयामा कारोबार भईरहेको पनि महासंघले जनाएको छ । ।
पुस मसान्तको प्रभाव बजारमा, नेप्से दोहोरो अंकले ओर्लियो
२६ पुस, काठमाण्डौ । यो महिनाको अन्तिम कारोबार भएकोले मसान्त प्रभाव बजारमा देखिएको छ । ‘कर्जा लिएकाले बैंकमा सावाँ र व्याजको किस्ता बुझाउने तथा व्यवसायीहरुले कर तिर्ने समय आएकोले पनि लगानीकर्ताहरु बजारमा त्यति केन्द्रीत हुन पाएनन,’ सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्याल भन्छन् । सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेकोमा त्यसको सम्भावना […]